Ihe ị ga-ahụ ma mee na Merzouga, Morocco | Akụkọ Njem
Merzouga bụ obere obodo dị na ndịda ọwụwa anyanwụ Morocco nke aburula ebe ndi njem nleta site na uzo o nwere na sub-Saharan dunes. Ọ bụ ụzọ iji nweta ebe ndị mmadụ bi na nso nso na nso ebe Sahara batara na Morocco. Yabụ ọ nwere ike bụrụ otu n'ime njem ndị ahụ ghọrọ ezigbo ahụmịhe.
Yak ise nte ekemede rute ebe a na Morocco, ihe ndị dị nso na ihe ị nwere ike ịhụ ma mee na mpaghara ahụ. Merzouga, n'agbanyeghị na ọ bụ obere ebe, abụrụla obodo na-eme njem nleta nke akwadoro ịnabata ndị njem si n'akụkụ ụwa niile.
1 Uzo esi aga Merzouga
2 Njegharị na Merzouga
Uzo esi aga Merzouga
La ụzọ kachasị ụzọ mgbe ị na-aga Merzouga gafere Marrakech, nke bu otu n’ime ebe ndi njem kachasi anya na ebe anyi rutere ugbo elu. Ekwesịrị ikwu na njem ahụ dị ogologo, ọ ga-erughị awa itoolu, yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ ebe a, anyị ga-enwe nnukwu ndidi. Ọzọkwa, e nwere ụzọ dị iche iche esi aga Merzouga. Otu n'ime ha bụ ịga bọs, nke dị ọnụ ala ma ọ nwere ike bụrụ njem dị oke egwu ma na-agwụ ike n'ihi na enweghi nkwụsị ọ bụla. Alternativezọ ọzọ bụ ịgbazite ụgbọ ala na ọdụ ụgbọ elu Marrakech iji weghachite ya na nloghachi, ebe ọ bụ na ịdọba ụgbọala n'akụkụ ebe ndị dị ka Jamaa el Fna Square siri ike. Nhọrọ a dị oke ọnụ mana na nloghachi ọ na-enye anyị nnwere onwe ọzọ ma ọ bụrụ na anyị ejiri GPS nke ọma. O doro anya na ọ bụ ihe kachasị mma maka ndị na-eme njem. N'aka nke ọzọ, anyị nwere nhọrọ nke ịgagharị na njem a haziri ahazi, nke anyị nwere ike iji nwayọ kwụsị ebe ụfọdụ dị ka Ourzazate ma ọ bụ nwee otu abalị n'ogige ikuku. Ọ bụ ezie na obi abụọ adịghị ya na nke a ga-abụ nhọrọ kachasị ọnụ, mana ọ bụkwa nke kachasị mma.
Njegharị na Merzouga
Ọ bụrụ na ịhọrọ ịhọrọ njem njem, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ụfọdụ ebe na-adọrọ mmasị ọtụtụ ụbọchị. Mmụgharị nkịtị ga-ewe anyị ihe dị ka ụbọchị atọ ịbịa ma laa, na-akwụsị na isi ihe dị mkpa. Otu n'ime nkwụsị mbụ ga-adị na obodo kachasị mkpa ma ọ bụ ksar dị na Morocco, Ait Ben Haddou. A na-ese ihe nkiri dịka 'Alaeze Eluigwe' ebe a. Obodo ewusiri ike pụtara otu ihe, yana ụlọ ụlọ adobe a hapụrụ n'anyanwụ. Ọ dị kilomita 190 site na Marrakech. Taa, ọ bụ ebe akpọrọ World Heritage Site na nke na-apụ na njem, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị bi na ya akwagala obodo ọhụrụ n'akụkụ nke ọzọ nke osimiri ahụ.
Na gaa Merzouga anyị nwekwara ike ịkwụsị na Ouarzazate. Ọ bụ obodo mara mma ịhụ na nnukwu nkwụsị tupu ịbanye na Atlas na Merzouga. N'ime ebe a, anyị nwere ike ịhụ Kasbah nke Taourirt, Al Mouahidine Square ma ọ bụ ụlọ ọrụ Atlas na-achọsi ike ebe a na-ese ihe nkiri dịka 'The Jewel of the Nile' ma ọ bụ 'Gladiator'. Na njem anyị na-aga Merzouga, anyị ga-aga n’ihu site na ndagwurugwu Dades na Todra Gorges, na mbara ala ha mara mma.
Ọ bụ ezie na Merzouga bụ obodo ebe ndị mmadụ gara n'ọzara a na Morocco na-anọkarị, nke bụ eziokwu bụ na ihe anyị chọrọ ịhụ bụ Erg Chebbi. Otu erg na-bụ okwu na-egosi ọzara nke aja aja mere na nke a bụ ihe kacha mkpa na Morocco. Na nke a, anyị nwere ike ịnwe ọmarịcha ihu ọma dị egwu nke kilomita iri atọ a na-enye anyị.
Ihe omume enwere ike ime n’ime ozara a di otutu ma di iche, nke obula na-ekpori ndu. Ije ije na dunes dị mkpa, mana enwere ike ọ bụghị naanị iji ụkwụ mee ya, ebe ọ bụ na ndọtị ya buru oke ibu. A na-ahazi njem mmụta na 4 × 4 ma ọ bụ quad. Mana otu n'ime ahụmịhe kachasị mma bụ ịrụ ụka adịghị ya na ịnya dromedary iji jee ije na dunes ndị a.
Ihe a na-akpọ sandboarding nwere ike ịbụ nnukwu ntụrụndụ. Ọ bụ maka iji okpokoro mee ka ha nwee ike inye gị ụlọ ọrụ, ịnyagharị dunes dunes. O doro anya na ọ bụ nnukwu obi ụtọ ma ọ bụrụ na anyị na ụmụaka aga. Ma ọ bụkwa ebe dị mma ịchọta anụmanụ, ebe ọ bụ na enwere nkịta ọhịa na mpaghara ahụ.
N'ikpeazụ, ọzọ n'ime ọrụ kacha mma anyị ga-eme na Erg Chebbi ma ọ bụ na Merzouga bụ ịrụ ụka adịghị ya. inuri ọchichiri n'abali. Anyị na-ezo aka n'eziokwu na na ebe ndị dị ka nke a, ebe enweghị mmetọ ọ bụla, anyị nwere ike ịnụ ụtọ igwe nke jupụtara na kpakpando nke ga-eju anyị anya kpamkpam. Na ebe ha na-ahazi iji nọrọ ọtụtụ abalị n'ọzara ka ahụmịhe anyị wee bụrụ ihe pụrụ iche ma anyị chekwaa ebe a pụrụ iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Morocco » Ihe ị ga-ahụ na Merzouga